Izibonelelo zokuFunda ukuthetha nokufunda isiNgesi isiChina
Unomdla wokufunda isiMandarin IsiShayina ? AWUKHO wedwa. I-Mandarin yenye yeelwimi ezithandwa kakhulu kwi-shishini, ukuhamba kunye nokuzonwabisa.
Abantu abaninzi bacinga ukuba ukufunda i-Mandarin Chinese kunzima. Akungabazeki ukuba ukufunda ukubhala abalinganiswa baseMandarin baseTshayina kunomngeni onzima onokuthatha iminyaka ukuyiqonda. Ukufunda ukuthetha isi-Mandarin isiTshayina, kodwa kunjalo, kulula kakhulu kuba akukho nantoni yesenzo esitholakala kwiilwimi ezininzi zaseNtshona.
I-Mandarin IsiTshayina yilwimi eluthethayo, oku kuthetha ukuba umgca wesilayidi inokutshintsha intsingiselo yayo. Kukho iitoni ezine ekuthethwa ngazo kuMandararin: phezulu; kuvuka; ukuwa nokunyuka; kunye nokuwa.
Ezi ntlobo zeetoni zisetyenziswe ngesiNgesi ukugxininisa okanye ukuchithwa, kodwa ama-Mandarin amathoni ahluke ngokupheleleyo. Iitoni ziyinxalenye engumngeni onzima we-Mandarin, kodwa kamva umgama sele uphunyewe, ulwimi lwesilmama nolwimi luyamangalisa.
Ukufunda iMatarin Tones
Sinamaphepha amaninzi kwaye sizisebenzisa ukukunceda ukuqonda amathoni amane eMandarin. Kufanele usebenzise amathoni akho imihla ngemihla de ukwazi ukuwabiza kwaye uwaqonde ngokulula.
Zisebenzise iifayile ezivakalayo ezifakiwe kwezi zifundo zeetoni ngokuziphinda zize zikwazi ukuvelisa ngokuchanekileyo amathoni amane.
Ukusebenzisa iiTones ezine
Uninzi lwabantu lubambelela ekufundeni abalingisi baseTshayina bade banako ubuncinane bokuqonda okubalulekileyo kwilwimi elithethayo.
Ngethamsanqa, kukho enye indlela yokufunda nokubhala iMarinarin esekelwe kwiNtshona (yamaRoma) iilfabhethi- iRomania .
I-Romanization idlulisela izandi zesiTshayina ezithethiweyo kwiilfabhethi zamaRoma ukuze abafundi bakwazi ukufunda nokubhala ulwimi. Kukho iinkqubo ezininzi ze-Romanization, kodwa eyaziwayo yiPinyin .
Zonke izifundo kwiziko lewebhu zisebenzisa i-Pinyin, kwaye isetyenziswe kwakhona kwininzi yezifundo kunye nezinye izinto zokufunda. Ukukwazi ukufunda nokubhala iPinyin kubalulekile ekufundeni isiChina saseMandarin.
Nazi ezinye izixhobo zePinyin:
I-Pinyin Romanization yokufunda isi-Mandarin
Bhala abalingiswa baseTshayina usebenzisa i-Pinyin
Kukho izithintelo ezimbalwa xa kuziwa ngolwimi lwesiLamarin. Ulwakhiwo lwezivakalisi luhlala luhluke kakhulu kwiilwimi zaseNtshona, ngoko kufuneka ufunde ukucinga eMandarin kunokuzama ukuguqulela kolwimi olunye.
Kha thazeka, nangona kunjalo. Ngeendlela ezininzi, ulwimi lwesi-Mandarin lulula kakhulu. Akukho zintetho ezenziwayo, kwaye awunakuze uxhalabele malunga nezivumelwano zesifundo / zezihloko.
Nazi ezinye izihloko kunye nezifundo kwigrama yesiMandarin:
Ukwakhiwa kwezivakalisi zaseMandarini
Ukwandisa Isigama sakho
Emva kokuba unesiseko seetoni kunye nokubiza, ungaqala ukugxila ekuwandiseni isigama sakho. Nazi ezinye izixhobo zokwakha izixhobo:
Sinemibuzo emininzi yomsindo enokukunceda ekufundeni kwesiMandararin ngokuvavanya ukuqonda kwakho ukuphulaphula.
Amanani ukusuka kwi-One kuya kweyishumi
Iincwadi zesiFrentshi zesiNgesi ezimbini
Kutheni Sithi 'Ama-imeyili' ngesiSpanish?
IsiFundo seFCE samahhala kwi-Intanethi
Ixesha elizayo leMandarin usebenzisa i-Yao ne-Hui
Inkcazo ye-Bopomofo yeTy Phonetic System
Kutheni sifunda iSpanishi?
I-Piano Yam Ininzi Kangakanani?
3 Inkolelo (kunye neNyaniso) Ngokumalunga nokuQinisa ukuQeqesha kunye neGalofu
Nakhu okufuneka Ukwazi Ngezicwangciso zeSifundo
Okulungileyo, Okubi, kunye nokuxhatshazwa kweeNkundla zeClay
Iingcebiso zeNkcazo zeNcwadi yamaKristu
Famous Scientist Izithombe - E Amagama
Imeko yangoku eYiputa
EKentley Wesleyan College Admissions
Imfazwe yaseSri Lankan
Isibhengezo sokuzimela kunye nobuxoki bokuba ngumKristu
Yintoni Eyenzekayo 'Kubugcisa Bemizila Yezabelo' I-Adaptation ye-Movie?